Marquette पार्क मा Futsal • DutchtownSTL.org utch Dutchtown, सेन्ट लुइस, MO
Marquette पार्क मा फुटसल
मार्क्वेट पार्क सेन्ट लुइस मा पहिलो सार्वजनिक फुटसल अदालत को घर हो। बीच एक साझेदारी को माध्यम बाट सेन्ट लुइस सिटी एससी, डचटाउन मुख्य सडकहरू र Marquette पार्क को सहयोगीहरु, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, STL बनाइयो, रेनेरी निर्माण, McConnell र एसोसिएट्स, र अन्य दाताहरु, हामी सबै को लागी डचटाउन छिमेकमा यो रोमाञ्चक युवा खेल ल्याएका छौं! परियोजना को बारे मा सबै पढ्नुहोस्.
फुटसल के हो?
Futsal एक मापन-डाउन मैदान मा फुटबल जस्तै छ। खेल उरुग्वे मा उत्पन्न भएको छ, दक्षिण अमेरिका भर मा लोकप्रियता हासिल गरीएको छ, र छिटो बिश्व भर मा विस्तार हुँदैछ। प्राय घर भित्र पनी खेलीन्छ, खेल एक कठिन सतह संग एक सानो पिच मा खेलीन्छ र कम उछाल संग एक सानो, बलियो बल को उपयोग गर्दछ। फुटसल खेल एक टीम को पाँच खेलाडीहरु संग खेलेका छन्, र खेलहरु दुई २० मिनेट आधा मिलेर बनेको छ।
क्षेत्र को सानो सीमा को कारण, फुटसल रचनात्मक रणनीतिहरु, प्रविधि, बल नियन्त्रण र छिटो सजगता मा जोड दिन्छ। लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ता धेरै विश्व प्रसिद्ध फुटबल स्टारहरु, फुटसल मैदान मा आफ्नो शुरूवात भयो। छिटो गती र उच्च स्कोरिंग, futsal अवसर प्रदान गर्दछ नयाँ खेलाडीहरु को लागी ठूलो पिच मा सार्नु अघि बहुमूल्य प्राविधिक सीपहरु को विकास गर्न को लागी, साथै अनुभवी फुटबल खेलाडीहरु को लागी शिल्प सम्मान।
हामी फुटसल कसरी खेल्छौं?
सरल! केवल एउटा बल लिनुहोस्, केहि साथीहरु लाई समात्नुहोस्, बल छोड्नुहोस्, र जानुहोस्! नियमहरु फुटबल जस्तै धेरै छन्।
यदि तपाइँ आधिकारिक नियमहरु को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, यहाँ आधारभूत छ:
गोलकिपर सहित एक टीम को पाँच खेलाडीहरु
गोलकिपर मात्र आफ्नो हात प्रयोग गर्न सक्छन्
एउटा सानो, कठिन आकार ४ बल (वा १३ बर्ष मुनिका बच्चाहरु को लागी आकार ३) को उपयोग गर्नुहोस्
प्रत्येक २० मिनेट को दुई अवधि
कुनै offsides छैन
जब बल खेल बाट बाहिर जान्छ थ्रो-इन्स को सट्टा किक-इन्स
पूर्ण फुटसल नियम
अधिक जानकारी र नियमहरु मा अन्तिम अधिकार को लागी, पूरा हेर्नुहोस् खेल को फीफा फुटसल कानून.
Marquette पार्क Futsal समाचार मा
सेन्ट लुइस सिटी एससी संग Kickoff
शनिबार, सेप्टेम्बर 25, डचटाउन मुख्य सडकहरु मेजर द्वारा सामेल भएको थियो लीग फुटबल टोली सेन्ट लुइस सिटी एससी र अन्य सामुदायिक साझेदारहरु को एक संख्या Marquette पार्क मा नयाँ फुटसल अदालत को भव्य उद्घाटन मनाउन। फुटबल टीम छिमेकका बच्चाहरु लाई फुटबल बलहरु दिईयो, र Umoja फुटबल नयाँ पिच मा छिटो प्रदर्शनी खेल प्रस्तुत।
यो सेन्ट लुइस पोस्ट-प्रेषण र अन्य समाचार आउटलेटहरु घटना को लागी हात मा थिए कि डचटाउन छिमेकीहरु र सबै सेन्ट लुइस क्षेत्र भर बाट फुटबल उत्साहीहरु लाई आकर्षित गरीयो। को पढ्न पोस्टयहाँ लेख छ। तपाइँ मा kickoff बाट अधिक फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ डचटाउनस्टाइल फ्लिकर पृष्ठ.
Marquette मा अधिक Futsal को लागी ट्युन रहनुहोस्!
यो पन्ना बूक्मार्क गर्नुहोस (dutchtownstl.org/futsal) Marquette पार्क फुटसल अदालत मा सबै नवीनतम समाचार र घटनाक्रम को लागी। हामी नियमित पिकअप खेल र नयाँ कार्यक्रम चाँडै घोषणा गर्ने आशा! त्यहाँ एक पनि छ Marquette पार्क फुटसल समूह फेसबुकमा जहाँ तपाइँ मिति सम्म रहन सक्नुहुन्छ।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो सेप्टेम्बर 27th, 2021 .
डचटाउन STL.org Marquette पार्क मा फुटसल